To: खुसी खोसिएको दशैं
डा. राजु अधिकारी, काठमाडाैं असोज २६ - महात्मा बुद्धले एकपटक जीवनलाई सेलिबेस गर अर्थात् विवेकपूर्ण संयततायुक्त जीवन बाँच भनी उपदेश दिएछन्। केही समयपछि शिष्यहरूले आफ्नो स्वार्थ र मस्तीका लागि बुद्धले सेलिबेट हैन, सेलिब्रेट भनेका थिए भनेर व्याख्या गरेछन्। बुद्धका शिष्यहरूको पालो–परम्परामा सिनियरहरूले भनेपछि कनिष्ठहरूले त्यसलाई सत्य भन्ठान्नै पर्‍यो।
काठमाडौँ,असोज २५ - आश्विन शुक्ल दशमीका दिनमा मनाइने विजयादशमी पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको प्रसादस्वरुप टीका, जमरा थापी मनाइँदैछ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आज देवी विसर्जनको साइत बिहान ८ बजेर २५ मिनेटमा रहेको जनाएको छ । टीका प्रसाद ग्रहण गर्न साइत खोज्नेका लागि भने ८ बजेर ४५ मिनेटको साइत उत्तम रहेको अध्यक्ष एवम् धर्मशास्त्रविद् प्रा डा रामचन्द्र गौतमले राससलाई बताए ।
काठमाडौँ, असोज २४ - आश्विन शुक्ल नवमीका दिन मनाइने महानवमी पर्व आज हर्षोल्लासका साथ दुर्गा भवानीको पूजाआजा गरी बलि दिएर मनाइँदैछ । आज महानवमीका दिनमा गरिने दुर्गा पूजालगायतका कार्य गरी घटस्थापनाका दिनमा राखिएको जमरा विभिन्न शक्तिपीठमा लगी चढाइन्छ । दसैँघर र कोतलगायत राज्यका विभिन्न देवी मन्दिर र शक्तिपीठमा बोका, हाँस, कुखुरा र राँगाको बलिसहित दुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना र दुर्गा सप्तशती एवम् देवीस्तोत्र पाठ गरिन्छ ।
काठमाडौँ, असोज २३ - आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिनमा मनाइने महाष्टमी पर्व आज नेपालीले बडादसैँका रुपमा दुर्गा भवानीको पूजाआजा गरी भव्यताका साथ मनाउँदैछन् ।
दिनेश दिपु सुवेदी - राजधानीहुँदै जिल्लास्तरमा बसेर चौबीसै घण्टा दौडधुपमा व्यस्त पत्रकार अनि तिनको दसैँबारे सधैँ सबै मौन।
ब्रबिमकुमार - सोह्र श्राद्धको एक साँझ
रवीन्द्र मिश्र - ‘तँ ठूलो भए, तँ ज्ञानी भए, तँ मानि भए, तँ धनि भए, तँलाई कहिले रोग नलागोस्, चन्द्रमा दाहिने हुन्’ आदि(इत्यादी मैले सुनि आएका आशिर्वादहरू हुन्। अहिले म यसो सोच्छु, यो समाज विग्रनु, यो संसार प्राविधिक र बौद्धिक ज्ञानको भण्डारका रुपमा विकशित भएर पनि यतिविघ्न अमानविय समस्याहरूबाट ग्रस्त हुनमा मूलरुपले बालबालिकाहरूलाई जुन ढंगबाट हुर्काइन्छ, बढाइन्छ र पढाइन्छ, त्यो नै जिम्मेवार छ।
हाम्रो शास्त्रले नै लाभांशको दश प्रतिशत सत्कार्यमा खर्च गर्नु भन्छ। सत्कार्यसम्वन्धी त्यस्तो वाणीलाई बेवास्ता गर्ने हो भने, साँझ/विहान मन्त्र जप्नुको के अर्थ र तिनलाई त पुजाबाट धर्म होइन, पाप लाग्छ
केपी अनमोल - तँपाईको दशैं कति भड्किलो, हेर न ! छिमेकीको मन दुखाई रहेछौं । चाँड नि यसरी मनाउँछन र ?
फेरि अस्ति मात्रै, घरखेत बगाइ लग्यो, आफन...